Faah Faahin:-Dagaal Beeleed Ka Dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah Faahin:-Dagaal Beeleed Ka Dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose
Faah Faahin:-Dagaal Beeleed Ka Dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal waaberigii hore ee saakay ka dhacay Degmada Wala-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose,kaasi dhexmaray Maleeshiyo beeleed hubeysan.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid xoogan,isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,wuxuuna u dhexeeyay Maleeshiyo beeleed wadda dega Degmada Wala-weyn.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay dagaalkii ka dhacay Degmada Wala-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoos,kaasi oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay.
Ugu yaraan 4 ruux oo labada dhinac ah ayaa dagaalkaas ku geeriyootay,halka tirro kalena ay ku dhaawacmeen,kuwaasi la dhigay Isbitaalada ku yaalla gudaha degmadaas.
Warar aan helnay ayaa sheegay in uu yimid,kadib markii labada dhinac ee dagaalamay dhinac ah kamid ah maalmo kahor uu dil geystay laba ruux,isla markaana sidaasi uu ku bilowday dagaalka.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in dadkii marka horey laga dilay labada ruux ay weerar kusoo qaadeen kuwa wax dilay xili ay ku sugnaayeen Wado gaadiidka ay maraan oo ku yaalla guadah Degmada Wala-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Degmada Wala-weyn oo ay uga hadlayan dagaalkii saakay ka dhacay gudah degmadaas ,isla markaana dhexmaray labada Maleeshiyo beeleed oo halkaasi wadda dega.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabelle oo Magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan
Next articleCiidamo Cusub oo Tababar loo furay +Sawirro
Xisbiga ucid oo xilkii ka qaadey laba xubnood oo Taageerey furida...
Prof. Kasoo jeeda somaliland oo xisbi ka furtey muqdisho